यौनसम्पर्क र प्रजनन – Khabar Art Nepal
By खबर आर्ट नेपाल	 On १९ श्रावण २०७५, शनिबार ११:५२
म २७ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हाम्रो तीन महिनाको बाबु छ । मेरी श्रीमती २५ वर्ष पुगिन् । हामी अब दुई–तीन वर्ष शिशु नजन्माउने योजनामा छौं । स्वास्थ्यका दृष्टिले परिवार नियोजनका लागि कुन उपाय अवलम्बन गर्नु ठीक होला ? समाजमा शिशु जन्मिएको छ–सात महिनासम्म यौनसम्पर्क गर्नु हुँदैन भनिन्छ, सत्य के हो ? कति महिनामा श्रीमतीसँग सम्पर्क गर्न मिल्छ ? के अहिले नै हामीले यौनसुख लिन सक्छौं ? मेरी श्रीमतीको स्वास्थ्य ठीक छ भने हाम्रो शिशु नर्मल तरिकाले जन्मिएको हो ।- र.
यस्तो लिंग पार्क, जहाँ भेटिन्छ युवतीको भिड